BAREFOOT...!!!: 'मान्छेको रङ' भित्रका रङहरु
'मान्छेको रङ' भित्रका रङहरु
२०७१ माघ १७ गते कथाकार आन्विका गिरीको दोश्रो कृति "मान्छेको रङ" सार्वजनिक भयो । साङ्ग्रीला बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक माओवादी द्वन्द्वमा पिल्सिएका केही सर्वसाधारणहरुको कथा हो । पुस्तकमा ३७८ पृष्‍ठ छन् ।
The Book "Manchheko Rang" by Anbika Giri
इमान्दारीपुर्वक भन्नुपर्दा यो पुस्तक पढेर केही लेख्ने योजना थिएन, बीचमा ३-४ पटक त मलाई ह्या किन पढिरा'होला, छोड्दिम जस्तो पनि लाग्यो । तैपनी पढेर सकाउँदा केही नलेखी रहन सकिन । भलै यो पुस्तक समीक्षा होइन, पुस्तक पढेर मनमा आएका कुरा हुन् ।
पुस्तकमा तीन जना पात्रहरुले आ-आफ्नो कथा प्रस्तुत गर्छन् । ती कथाहरु एक अर्कासङ्ग नमज्जाले जेलिएका छन् । बिभिन्न पात्रहरु बिभिन्न समयमा बिभिन्न रङमा आउँछन् र जान्छन् । शहरको भिन्दै रङ, गाउँको भिन्दै रङ । क्रान्तिका नाममा जे पनि गर्न चाहनेको एउटा रङ छ, त्यस्लाई आफु अनुरुप व्याख्या गर्नेहरुको अर्को । समग्रमा रङ्गीचङ्गी मान्छेका रङ छन् यस्मा । एक मुख्य पात्रको वरीपरी रहेर बिभिन्न पात्रका दृष्‍टिकोण चाखलाग्दो तरीकाले पेश गरिएको छ ।
युद्दको समयको गाउँको बातावरणको पनि सजीव वर्णन रहेको छ पुस्तकमा, त्यो बेलाको समाज र त्यो बेलाको वर्गीय विभेदका कुराहरु प्रष्ट रुपमा पेश गरिएका छन् । पात्र र स्थानको वर्णन कलात्मक छ, त्यो ठाउँमा आँफै पुगेको या ती मान्छेहरुसँग बोलिराखेको अनुभव हुन्छ । क्रान्तिको रङमा पनि मान्छे मार्नु गलत हो, पढ्नु पर्छ, अरुलाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेखालका मान्छेहरु पनि थिए भन्ने कुरा पात्रहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।
कथा सानैबाट क्रान्तिकारी बन्ने सपना पालेकी एउटी किशोरीको वरीपरी घुम्छ । पुस्तकमा हिरो छैन । हिरो हुन-हुन खोज्ने दुई तीन थान पात्रहरु भएपनी पुस्तकमा धेरै चर्चा भएको गोर्कीको "आमा" उपन्यासमा झैं महिला पात्र अझ भनौं महिला पात्रहरुलाई बलियो पाराले उभ्याएकी छिन् उपन्यासकारले । युद्द र क्रान्तिका वास्तविकता नबुझ्दै क्रान्तिमा सामेल भएर देश बनाउन हतारिएकी एउटी किशोरीको अनुभूती भन्दा फरक पर्दैन यस्लाई ।
'आमा, अब म क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट हुन चाहन्छु', मैले एक्कासी आमाको हात समाएँ ।
'केही हुँदैन क्रान्तिकारी भएर', आमाले मेरो चीउँडो समातेर भन्नुभयो, 'तँ फोहोरी मात्र हुन्छेस्।'
'आमा उनीहरु फोहोरी होइनन्, क्रान्तिकारी हुन्' बेकार हुने जान्दाजान्दै पनि आमालाई मैले फेरी सम्झाएँ । ( पृष्‍ठ १२०)
एउटा सत्य घटना सुनाउँछु । म काठमान्डुमा क्याम्पस पढ्थें, गरीबी भएका कारणले खासै मान्छे गनिन्नथें । बिदा हुँदा घर गैराख्थें । घर गएका बेला माओवादीहरु आउँथे । उनिहरुको जीबनशैली, बोलीचाली, हाउभाउ र उत्साहले खुब प्रभावित पार्थ्यो मलाई । गर्न के हिंडेका हुन् नबुझेपनि दालमोठ च्युरा र पानीका भरमा सबैलाई नमस्ते गर्दै हिंड्ने ती युवाहरु मलाई गजप लाग्थे । रेडियोले आतंककारी भन्दा मलाई यस्ता मान्छे कसरी आतंककारी हुनेहोलान् झैं लाग्थ्यो । उपन्यासकी किशोरी पनि लगभग त्यस्तै सोच्छिन् । क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने नबुझेरै थिचोमिचो हुनुहुन्न र देश परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बुझ्छिन् ।
दुवै हात कम्मरमा राखेर उ मरी मरी हाँस्यो । एकछिन अघिसम्म रोइरहेको म उ हाँसेको देखेर लाजले डल्लो परें ।
'म क्रान्तिकारी बन्न सक्छु है?' मैले पक्का गर्न सोधें ।
'यहाँ के छ?' उस्ले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोध्यो ।
'यहाँ त देशका लागि जे पनि गर्न सक्छु भन्ने छ', मैले पनि आफ्नो छातीमा हात राखेर भनें ।
'त्यसो भए के को चिन्ता', उस्ले मेरो गाला थपथपायो । ( पृष्‍ठ २१२)
उपन्यासले अहिलेसम्म जनयुद्धका बिषयमा नउठाइएका या कम चर्चा गरिने आत्मसमर्पण गर्नेको मानसिकता, आत्मसमर्पण गर्ने र पार्टीमा लाग्नेको परिवारको भोगाइ त छट्पटाहटलाई उजागर गरेको छ, युद्धका क्रममा हुने अन्य बिषय त छँदैछन् । एउटै मोर्चामा रहेका मान्छेहरुबीच पनि विरोधाभास देखाएर लेखिकाले समाजजस्तै क्रान्ति र युद्दमा पनि बिभिन्न रङका मान्छे हुन्छन् थिए भनेर देखाउन खोजेकी छन् । एउटै घरभित्रका, एउटै मोर्चामा रहेका, एउटै समाजका मान्छेहर्को थरीथरी मनोदशा देखाउन सफल उपन्यासको शीर्षक यस् अर्थमा एकदमै सार्थक देखिएको छ ।
पुस्तकमा प्रेमको पनि उपस्थिती छ । प्रेमका बिषय आउँदै हराउँदै गर्छन् । स्कुलको प्रेम, क्रान्तिको मोर्चामा हुने प्रेम र शहरमा हुने प्रेम बेलाबखत झुल्किन्छन् अनि हराउँछन् ।
'माया, तिमीले अब केही समय पर्खिनुपर्छ', उसले आफ्नो हात मलाई दियो ।
'म अब सक्दिनँ', मैले उस्को हात समाइनँ ।
'तिमिलाई म कहीँ केही गर्न सक्दिन यतिखेर ।', उस्ले हात दिइ नै रह्यो, 'तिमी निराश नहोउ।'
मैले फेरी ढाड फर्काएँ ।
'माया, म तिमीलाई प्रेम गर्छु' उसले सुस्तरी भन्यो । ( पृष्‍ठ ३२७)
उपन्यासमा केही कमजोरीहरु पनि छन् । शुरुको उत्साहप्रद शुरुवातपछि बीचका केही भाग अस्वाभाविक र पट्ट्यारलाग्दा छन् । धेरै ठाउँमा लेखक अली बढी नै भावुक भएर पात्रलाई आफ्नो कुरा भन्न लगाएको या रटेर पढाएको जस्तो देखिन्छ । संवाद र कथानक अलिक स्वाभाविक भएका भए हुने, विशेषगरी माया सानो छँदाका संवादहरु अलिक बढी नै भावुक छन् । लेखक उपन्यासभरी नै उपस्थित रहने प्रयास गरेर होला, पात्रहरु अलिक बढी नै हौसिने या अलिक बढी प्रभावित हुनेजस्ता देखिन्छन् । म गलत हुन पनि सक्छु किनभने मैले मोर्चामा युद्ध लडेको छैन ।
जेठ्को एउटा साँझमा पत्रीकामा यस्तो खबर पढेपछि म रोकिए, 'हजुरबुवा, मदन भन्डारी मर्नुभएछ ।'
'अगाडी पढ् न ।' हजुरबुवाले हकार्नुभयो ।
'म पढ्दिनँ ।' मैले पत्रीका हजुरबुवाको हातमा थमाएँ, 'कस्ले मार्यो ? म पुलिसलाई खबर गर्छु।' (यो भन्दा माया कक्षा एकमा पढ्ने हुन्छिन् । पृष्‍ठ ७३)
युद्दका बेला हुनेगरेका कमजोरी र ज्यादतीहरुका बिषयमा पनि उपन्यास अलिक चुप छ । माया सानै छँदा मान्छे मार्नु हुँदैन भन्ने कतै कतै बोल्न लगाइए पनि क्रान्ति गलत हुनैसक्दैन भन्ने जताततै भेटिन्छ । गद्दार या नैतीक विचलनका नाममा आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पाखा लगाउने लगायतका विषय पनि उठ्छन् तर टुङ्गोमा पुग्नेगरी होइन ।
उपन्यासको सम्पादनमा अलिक कमजोरी भएको हो कि, एकै खालका वर्णनहरु धेरै ठाउँमा हुँदा अलिक पट्ट्यार लाग्छ । सम्पादनमा अलिक जाँगर लगाएको भए पुस्तक अलिक कम मोटो र बढी चाखपूर्ण हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो ।
Writer Anbika Gir (image : her facebook)
समग्रमा राजेन्द्र मास्केद्वारा अनुवादित 'अग्नी दिक्षा' लगायत रसिएन उपन्यासहरुको नेपाली अनुवाद पढेर हुर्केको मलाई यो उपन्यासले नेपाली क्रान्तिकै नेपाली लेखाइको अनुभव गरायो । त्यो समय त अव रहेन तर द्वन्द्वको एक दिशा बुझ्न यो उपन्यास पठनीय कृति हो । युद्द नभोगेका, युद्धमा जानेहरुको उत्साह नबुझेकालाई पट्ट्यार लाग्नसक्छ तर कुरा के हो भने अहिलेको माओवादी नेत्रित्व हेरेर त्यो बेला ज्यान र भविष्यको माया नगरी युद्दमा कुद्नेहरुको मुल्याङ्कन गर्नु गलत हुनेछ ।
पुस्तकले एक राम्रो महिला आख्यानकारको रुपमा आन्विकालाई थप स्थापित गराउने पक्का छ जे होस् । सशक्त कृतिका लागि लेखिकालाई बधाई ।
Sujit K. jha March 17, 2015 at 9:12 PM
It seems good book to read, I look forward to read it, Thanks for nice article on it
Please also read http://www.rajeevjha.com/i-have-an-obligation-to-myself/ an awesome post of Rajeev Jha